Kufanana nevashambadzi vazhinji, ini ndine zvishoma ruzivo neMicrosoft Excel. Ndakaishandisa kuronga zviitiko, kuronga kudya, uye kuronga data - asi ini handina kana ruzivo rwemberi rwandinoshuva dai ndakaita.
Uye nekutenda kune iwo hunyanzvi hunyanzvi, ndiri kugara ndichizviisa pasi kune iyo tedium yekuvandudza maspredishiti angu nemaoko.
Ndiri kunyatsoziva kuti ndiri kurasikirwa nenyika yeExcel kosi yekudzidzira iyo inogona kundidzidzisa maitiro ekugadzirisa zvinyorwa zvangu nekuchengetedza maawa enguva.
Pandakabvunza kunyangwe vandinoshanda navo veExcel-savvy kwandakatora ruzivo rwavo, vakandiudza zvinhu zvakaita sekuti, "Ini ndakanyanya kudzidza kubva kune vandinoshanda navo neshamwari," kana, "Kana ndine mubvunzo chaiwo, ndinobvunza mumwe munhu kana kutsvaga paGoogle. . ” Kuyenzerana. Asi sekutanga, ini ndinogona kunge ndine mashoma mashoma mibvunzo yeExcel yekuvimba nevandinoshanda navo - kana Google - kupindura yega yega.
Ini handikwanise kunge ndiri ndega kunze uko anoda kugona pasirese inozivikanwa dhata yekuongorora uye yekuona mhinduro - kana zvirinani kudzidza maitiro ekugadzira machati uye magirafu izvo zvinofadza maneja wangu.
Saka mumweya wekuva unobudirira, mushambadzi anotungamirwa nedatha, ndakatsvaga internet kuti ndiwane zviwanikwa zvepamhepo zvekudzidza Excel. Mazhinji eaya akasununguka, uye iwo asiri akakodzera kudyara.
Tarisa, bhaisa mabhuku ako mavara, uye uwedzere pedyo nekushanda zvakajeka mu Excel.
Nzira Yokudzidza nayo Excel ye Free Free
1. Microsoft Yekudzidzisa Center
Kana zvasvika pakudzidza chigadziro chitsva, wadii kutanga patsime? Mushure mezvose, hapana anoziva Excel nani kupfuura vanhu veMicrosoft.
Muchokwadi, ivo vakaita basa rakakura kuisa pamwechete iyo Office Training Center: A resource resource kubhidhiyo yese yeMicrosoft uye mabasa. The nzvimbo yekudzidzisa ye Excel ine boka rose rezvidzidzo zvemahara, mavhidhiyo, uye magwara pane Windows, Mac OS, Android, iOS, uye Windows Runhare runovhara yazvino vhezheni yeExcel, pamwe nevakuru.
Paunongobaya muchikuva, iwe unowana zviwanikwa zvakapatsanurwa neExcel kugona: Kwevatanga (semasvomhu ekutanga uye kugadzira chati), vashandisi vepakati (sekumisikidza uye kusefa dhata, mafomati ane mamiriro, uye VLOOKUPs), uye vashandisi vemberi (senge pivot matafura, epamberi IF mashandiro, uye maitiro epassword-chengetedza mapepa uye mabhuku ebasa).
2. Iyo Spreadsheet Peji
Heino nzvimbo yakanyatsorongedzwa saiti ine chock izere nemazano anobatsira eExcel, akaunganidzwa nehunyanzvi anonzi John Walkenbach. Pamakore makumi matatu apfuura, akanyorwa anopfuura makumi matanhatu mabhuku eExcel evashandisi vematanho ese, uye zvakapoterera mazana matatu ezvinyorwa uye ongororo dzemagazini senge InfoWorld, PC World, uye PC / Computing. Pane imwe nguva, akanyorera mahwendefa emwedzi wepadheseti yeropa PC World. Mune mamwe mazwi, murume anoziva zvinhu zvake - uye anoziva nzira yekuzviburitsa.
Chikamu chinonyanya kubatsira pa webhusaiti yake ndeipi Excel Mazano tebhu, ine chinyorwa chakareba chemashoko anobatsira pakugadzirisa mafashoni, mazano, marati nemifananidzo, nekudhinda. Iro zano racho rinosanganisira zvinhu zvose kubva pakushanda nemazvikamu, kusunungura tafura yepivot kubva pane zvinyorwa zvayo, kuparadzira mapepa ekudzivirira FAQ.
The Kurodha tabu ndechimwe chikamu chinonyanya kubatsira chesaiti yaWalkenbach, kwaakawedzera mahara, asina kubatana download mafaera kumafaira aakagadzira, senge emahara emabhuku ebasa eExcel uye mawedzera-ins. Semuenzaniso, pane imwe Excel bookbook inowanikwa pakutsvaga iyo inopa mienzaniso yezvigadziro zvemhando dzemaitiro, zvaunogona kutamba nazvo uye tweak panguva yako, uye ugoziva navo usingatangi kutanga.
3. About.com's Spreadsheets Peji
Vakawanda venyu munogona kunge muchiziva webhusaiti yehupenyu About.com, asi iwe unoziva kuti ine zvayo spreadsheets subdomain - yakawanda yacho inozvipira kuExcel? Panogona kunge paine zviuru zvemirayiridzo inoiswa pane saiti, mazhinji acho anoratidzwa, sei-kutumira. Uyezve, zvinyorwa zvitsva zvinowedzerwa nguva dzose.
Chikamu chega chega chemukati chakakamurwa zvichienderana nezvose kubva pamafomula uye fomati, kumavhidhiyo, maturusi, uye matemplate. Kana iwe uchida kugara up-to-date pane ichangoburwa spreadsheet nhau uye matipi, iwe unogona kusaina kune yemahara tsamba yetsamba. Pane imwe chete bakoat: saiti iyi ine huwandu hwakawanda hweshambadziro - asi kana uchikwanisa kuimisa, zvirimo zviripo.
Purna “Chandoo” Dugirala, Chandoo.orgmuvambi, anoti ane chinangwa chimwe: "Kukuita iwe unotyisa kuExcel uye kuchata." Akatanga blog muna 2007 uye, nhasi, ine zvinopfuura mazana mana ezvinyorwa uye zvidzidzo pakushandisa Excel nekugadzira machati ari nani. Akavaka iyo blog senzanga, achidoma tsika senge kuzvininipisa, kuda, kunakidzwa, uye nyore.
Anoshanda zvakare kuti aite chinhu chinokosha kune vanhu vasiri English ivo rurimi rwavo rwekutanga.
Zhinji dzezano rake dzinobva kumaforamu, apo vanhu bvunza mibvunzo pamusoro peExcel - nezve mafomura, fomati, mapfupi, matafura epivot, zvichingodaro - uye chero munhu anogona kuvapindura. Chandoo anobva ashandisa mamwe eanobatsira mibvunzo yemaforamu kugadzira zvinyorwa uye zvidzidzo.
Asi hazvisi zvese zvakarongeka. Semuenzaniso, Chandoo akambogadzira dhijitari Pasita zai yekuvhima yeiyo blog positi, iyo yaisanganisira yekurodha pasi Excel bhuku rebhuku rine manomwe akavanzika mapandas. Vaverengi vakapikiswa kuti vawane pandas vachishandisa zvairatidza, maitiro eExcel, uye kunyangwe hunyanzvi hwe "I-Spy".
Nepo izvo zvinyorwa, maforamu, uye zvimwe zvikamu zvesaiti zviri zvemahara, iwe unogona kubhadhara kuti ubatanidze imwe yeakarongwa echandoo zvirongwa zvekudzidzisa, senge Excel Chikoro ($ 97 - $ 247), kana VBA Makirasi ($ 97 - $ 347). Uyezve, pane dzimwe nguva sarudzo yekutenga rimwe remabhuku ake - VLOOKUP Book or Excel Murairi Mubatsiri Ebook.
5. HubSpot Excel Re Source
Kuona seExcel ndeimwe yeanonyanya kudiwa hunyanzvi hwevashambadzi-vanofambiswa nedata - uye nekuti isu tinoda kuti vashambadzi senge iwe ubudirire - isu takagadzira zvimwe zvedu zvemukati zvedzidzo nezveExcel pano kuHubSpot. Kubva mahara ebook, kumatemplate, kune evhidhiyo tutorials, isu tinovavarira kufukidza huwandu hwakawanda hweExcel-inoenderana misoro.
Heano zvimwe zvishoma zvatinokwanisa:
"Maitiro Okushandisa Excel: I Essential Training Guide yeDeta-Drived Marketing”(Mahara ebook)
"9 Excel Templates Kuti Uite Kutengesa Zvishoma”(Mahara matemplate)
"Nzira Yokugadzira Pivot Table muExcel: A Step-by-Step Tutorial”(Vhidhiyo & blog post)
Heino sosi inoisa isu vanhuwo zvavo mukubatana neve Excel nyanzvi. MrExcel.comkuda kwekurumbira ndiko kwayo interactive message board, iyo inogara ichiongororwa nenharaunda yayo ye Excel gurus.
Bhodhi iri kurongeka maererano nehurukuro, sezviziviso zvizere, mibvunzo, uye MrExcel.com zvigadzirwa. Kana munhu anoshandisa mubvunzo mubvunzo, nhengo yemudzidzi weExExcel.com mhinduro ichapindura nemhinduro. Mibvunzo iyi inobva pakudzika basa re Excel, kugadzirisa mibvunzo inokurumidza.
Haasi wekuzvarwa Shona Shona? Unogona bvunza mibvunzo mumutauro wako wekare.
Kunze kwekutumira mibvunzo pabhodhi remashoko, unogona zvakare kutarisa VaExcel's "Hot Misoro" - inowanikwa kuruboshwe-kuruboshwe peji remba - izvo zvinosanganisira zvinhu sekutsvaga mari inokwana yemitsara yakaenzana kana isinganzwisisike, kana kubvisa inotungamira zero mukati memunda wenyaya. Saiti iyi zvakare ine raibhurari yemabhuku anobatsira eExcel nemabhuku ebook, uye kana iwe uchida rubatsiro nematambudziko akaomesesa, unogona kana kuhaya mupi wezano weExcel zvakananga kubva pawebhusaiti, nemari.
7. EdX Excel Makosi
Heano bhajeti-inoshamwaridzika sarudzo kune avo vari kutsvaga imwe yakasarudzika kosi, pane yedzidziso-imwe dzidziso: EdX isiri-purofiti iyo inopa yemahara dzidzo kune vanhu kutenderera pasirese - ine inonakidza modhi Excel kudzidzira masangano, zvose zvinotora nguva uye kuzvipira.
Kana vashandisi vakanyoresa kosi yakanzi “Yakasimbiswa,” vane mukana wekubhadhara muripo mukutsinhana chitupa chakasainwa nemurairidzi chine mucherechedzo wesangano, kuona kubudirira uye kuwedzera tarisiro yebasa. Iyo fizi inoshandiswa kubhadhara makosi, ichikupa iwe sarudzo yekutora mahara kana iwe usina hanya nekumbotungamira chitupa.
Zvikasadaro, kune mamwe makosi anopihwa padanho re "Professional Dzidzo", iro mari yacho isiri yekusarudzika. Mumwe muenzaniso ndeye Unyanzvi hweKushandisa nekuDhina nzira, yakagadzirirwa $ 60.
Kuti ikubatsire kusarudza yakarurama, rimwe nerimwe edX rinosanganisira mazano (ane nhamba kusvika kune nyeredzi shanu), uye ruzivo rwehurefu uye huwandu hwekuedza, kazhinji kuyerwa mumaawa nemavhiki. Panewo zvinyorwa pamusoro pehutano hwe ruzivo runodikanwa, pamwe chete nevhidhiyo zvinyorwa.
8. Annielytics Vhidhiyo Tutorials
Annie Cushing, nyanzvi yezvesa analytics data, yakasika iyo Annielytics Blog uye YouTube mugero kugovana ruzivo rwake nenyika. Usarega zita repunny richikunyengedza - ese ari maviri akadzikama akazara nezvakanaka chaizvo, chaizvo, uye zvakadzama padandemutande analytics matipi.
Kunyange zvirimo pano zvisiri zvese zvine chekuita neExcel - zvizhinji zvacho ndezveGoogle Analytics, semuenzaniso - ine mamwe makuru evhidhiyo yeVhidhiyo. Kunyangwe zvirinani, ivo vakagadzirwa nekutengesa uye webhu analytics mupfungwa, saka zvinoshanda zvakananga kune zvinhu sekushambadzira data mishumo. Iwo mavhidhiyo akasarudzika eExcel anogona kuwanikwa pano, kana nekutsvaga kwake YouTube chiteshi che "Excel".
Iwo maExcel misoro anosiyana zvakanyanya, kubva pamagadzirirwo epivot matafura, kusvika pakuwedzera tafura yekutsikisa kune yako dashboard uchishandisa iyo INDEX basa. Iwo mavhidhiyo anosiyanawo pakureba zvichienderana nemusoro wenyaya, kubva maviri-nehafu-maminetsi, kune avo vanopfuura hafu yeawa kureba. Kuti ndikupe zano rekuti mavhidhiyo akaita sei, heino imwe yezvatinoda, iyo inovhara muongororo wakazara weExcel machati:
Kana vashanyi vasvika pawebhusaiti yeKhan Academy, vanogamuchirwa nemitsetse miviri yakapusa asi ine simba yezvinyorwa: "Unongofanira kuziva chinhu chimwe chete: Unogona kudzidza chero chinhu." Uye kubva paalgebra kuenda kuastronomy, ichi chishandiso chinopa huwandu hwakawanda wemahara makosi pane, hazvo, chinenge chero chinhu - chemahara.
Izvo zvinosanganisira mashoma vhidhiyo tutorials paExcel. Mazhinji acho chikamu cheakakura, emazhinji-ezvikamu makosi pane akapamhama misoro, senge manhamba. Kutsvaga kwakawanda kwe "Microsoft Excel”Inoburitsa zvingaratidzika semhedzisiro shoma, asi ivo vanonyatsotsanangura zvimwe zvakakosha zvekushandisa Excel, senge kugovera uye mitsara yakakodzera kune data.
Nzira Yokudzidza nayo Excel Nokubhadhara Kudzidziswa
10. Lynda.com's Excel Kudzidziswa uye maTutorials
Mutengo: Free kuedza | $ 19.99 / mwedzi kubatana
Kana iwe uchida kuisa mari shoma mune yako Excel kudzidziswa, Lynda's Excel Kudzidziswa uye Tutorials inzvimbo yakakosha yekuishandisa. Nhengo dzeichi chinongedzo cheLinkedIn vanokwanisa kuwana zviuru zvemakosi pabhizinesi, tekinoroji, hunyanzvi hwekugadzira, uye software izvo zvinokubatsira iwe kushandira kune kwako wega uye kwehunyanzvi zvinangwa.
Inosanganisirwa anodarika zana makosi paExcel, uye anopfuura mazana mana ezviuru zvevideo tutorials inovhara yega vhezheni yechirongwa, pane chero chikamu chehunyanzvi. Ivo vanofukidza huwandu hwakawanda hwenyaya dzemusoro, kubva kune chimwe chinhu chakajairika se "Statistics ine Excel Chikamu Chekutanga," kune dzimwe niche misoro, senge "Dhata Kuona Nhaurwa Kutaurisa Zvakakosha."
Mutengo: $ 79 / course
apo Lynda.com anokumbira mwedzi wega-wekuwana mari yehutano, Coursera zvikwereti pane imwe nzira-kusvika-course. Kuwirirana nemayunivhesiti makuru nemasangano munyika yose, nzvimbo inoita mapoka eIndaneti pane nyaya dzakasiyana-siyana, kubva pakugadzirwa kwemimhanzi kuenda kune unyanzvi hwokudzidzisa.
Kune makosi mashoma chete ane chekuita neExcel, asi kana iwe uchitsvaga iyo iri padanho repamusoro redzidzo, vanogona kunge vakanakira iwe. Asi izvo, mazhinji emakosi ane chekuita neExcel anobva kuDuke University, senge "Excel kusvika MySQL: Ongororo dzehunyanzvi dzeBhizinesi Nyanzvi."
Izvo zvakati, idzi dzidzo hadziuye dzakachipa - mushure mezvose, iwo mamwechetewo anodzidziswa kumayunivhesiti epamusoro pasirese. Uye semakirasi mazhinji epasirese-nyika, yega yega inosanganisira hurukuro dzevhidhiyo, mibvunzo inofambidzana, kuongororwa kwevezera, uye mukana wekubatana nevamwe vadzidzi nevarairidzi. Ukangopedza kosi, iwe unozogashira kuzivikanwa zviri pamutemo, pamwe neyechisarudzo kosi chitupa.
Dai iwe uine maawa matanhatu ekusiya, waizoashandisa sei? "Kurara," "kuchenesa imba," uye "kubika chimwe chinhu" zvimwe zvezvinhu zvinouya kumusoro kwepfungwa dzangu, asi edza izvi pane saizi - ko kana iwe uchigona kuve nyanzvi yeExcel muiyo nguva yenguva?
Ndozvinovimbisa Udemy mune yayo "Microsoft Excel - Kubva Kutanga kune Nyanzvi mumaawa matanhatu”Kosi - ye $ 10.99. Udemy ndeimwe yemhando yakawanda kwazvo yekudzidza pamhepo kunze uko, uye ayo eExcel makosi zvirokwazvo haagume neiyo imwe sarudzo. Muchokwadi, pandinodzoka kune peji reimba, inoratidza akati wandei zvidzidzo pamusoro wenyaya, kana ndichida kuongorora sarudzo dzangu.
Idzo sarudzo ndidzo dzakawanda. Muchokwadi, kungo typha "Excel" mubhawa yekutsvaga kunopa mhedzisiro yakawanda, yega yega inoratidza nyeredzi chiyero, mutengo, kureba, uye chiyero.
Mutengo: Free kuedza | $ 14.95 mo.
Vatendi vakuru mu microlearning, mavhidhiyo aIntellezy anowira mumatanho matatu kusvika mashanu emaminetsi. Idzi nuggets dzezivo dzakarongwa kuita anotanga kuburikidza nedzidzo dzepamusoro, achifukidza Excel 2007-2016 uye Office365. Kunyanya, mapurosoft apps eIOS neIndaneti anoita kuti zvive nyore kudzidza pane kuenda.
Mavhidhiyo eIntellezy ari kunyatsobatana. Pane nguva dzose murayiridzi pa--krini anoratidza iwe zvaunofanira kuita. Uye nokuti vane hutano hwekutarisana-chiso-ne-chiso, vadzidzisi veIntellezy vanonyatsoteerera. Zvidzidzo zvavo zvinosanganisira kuongorora uye kushandisa mafaira kuitira kuti uone kuti uri kuitei nekutevera pamwe nemudzidzisi. Iwe unogona kupa Intellezy spin ne pachena 10-day trial.
Zita reichi chishandiso rinogona kutaridzika rinotyisa, asi iwe ungashamisika kuti iko kudzidziswa kuri nyore sei
Excel Everest iri kunze-kwe-kwe-bhokisi sosi iyo inokudzidzisa iwe Excel iwe uchiri in Excel. Chigadzirwa chaunotenga chinotora faira reExcel kukombuta yako, kwaunovhura Excel uye woita kufamba-kuburikidza nemakumi mana neshanu akasiyana eExcel mashandiro chaipo kubva pasampulaet yemuenzaniso. Misoro yakavharwa inosanganisira zvimiro zvemafomati, Vlookup, chati chisikwa, nezvimwe zvakawanda.
Iyi Excel yekudzidzira sosi inopa mazana ezviitwa, pamwe nemavhidhiyo tutorials akaisirwa mukati chaimo muyenzaniso Excel spreadsheet. Nekushandisa aya mazano muExcel paunenge uchidzidza iwo, iwe unonzwa ivo kunamatira newe iwe mushure mekupedza kudzidziswa kweExcel Everest.
15. Dzidza iT!
Mutengo: $ 130 / module
Dzidza iT! inopa Excel kudzidziswa mune akasiyana mafomati uye inoputsa chidzidzo chega chega pasi nemojuru. Ndiyo mhinduro yakanakisa yevashandisi veExcel vanogona kunge vasingagamuchire kungoteedzana vhidhiyo kana yakanyorwa nhanho-nhanho nongedzo.
NeLearn iT !, Vashandisi veExcel vanogona kusarudza kubva kumakosi mashanu akasiyana: Pivot Tables, Intro kuData Kuongorora, Chirongwa neVBA, Excel Simba Mushandisi, uye yekutanga Excel kosi yevazhinji vashandisi. Yese kosi inotaura iyo kosi yenguva (mumazuva) uye huwandu hwemamojimendi iyo kosi inosanganisira.
Chikamu chakanakisisa pamusoro peKudzidza iT! ndechokuti iwe unogona kutora chikoro chako chakasarudzwa zvina nzira dzakasiyana: musangano wevatungamiri ve-munhu-inotungamirirwa, tararame paIndaneti nevadzidzi vaunodzidza navo, pachivande mumusangano wakagadzirwa-tsika, kana musangano unofambidzana wevatungamiri-vakatungamirirwa uye vanobatanidza mafundo e-learning.
16. Yakabatanidzwa Mukudzidza Zvigadzirwa
Mutengo: Free kuedza | $ 29.99 mo.
LinkedIn haisi chete yehunyanzvi network. Iwe unogona zvakare kudzidza toni pane dzakasiyana bhizinesi misoro nerubatsiro rwezvinhu nyaya nyanzvi (maSMEs) avo vanogamuchira kudzidziswa pane iyo LinkedIn Kudzidza chikuva. Microsoft Excel imwe yenyaya dzakadai.
Dennis Taylor, mutariri webhizimisi iwe unogonawo kudzidza kubva Lynda.com, ndeye SME imwe inoshandisa Excel kudzidzira mazano pa LinkedIn. Masangano ake anobva kubva maawa matanhatu kusvika kumaawa 23 muchikamu chekudzidzisa nguva, uye inogona kupedzerwa purogiramu yako.
Buda LinkedIn Kudzidza nokuda kwezvose zviripo Excel zvidzidzo.
Mutengo: Free kuedza | $ 47 / course
Kwete chete eLearnExcel ndinokupai masere masere okudzidzisa mazano ekusarudza kubva, asi anopa zvikwereti zvinomwe zveExcel zvakare.
eLearnExcel inopa ichi chivimbiso: nekutora ese ayo eExcel makosi, iwe unenge uine hunyanzvi muExcel iyo yakakura kupfuura 99% yevevashandisi veExcel nhasi. Inovimbwa neMicrosoft pachayo, iyi suite yezvigadzirwa zvekudzidzisa inoputsa pfungwa dzeExcel mune zviri nyore, zvinogoneka vhidhiyo module - zvichikubvumidza iwe kuti udzidze pfungwa dzeExcel dzinonyanya kukosha kwauri. Makosi anotangira pamaminetsi makumi mashanu nemashanu kusvika maawa matanhatu pakureba.
Zvinomwe zveaya makosi anokupa iwe chitupa chinoenderana nekosi yawakatora. Ukapedza zvese zvinomwe, iwe unopihwa iyo Excel Master diploma. Haisi chinhu chakashata kuisa paunotangazve - kana pawebsite rebhizinesi rako, kana vashandi vazhinji vakanyoresa muzvidzidzo zveELearnExcel sechikamu che business subscription.
Excel Mundima Yenyu
Wagadzirira kutanga? Nezvishandiso izvi, unenge uri kushandisa Excel uine zvishoma-kune-hapana-ziya, pasina nguva. Uyezve, kurovedza kunoita kwakakwana - ndosaka kune mazinga mazhinji ematanho emakosi aripo. Tanga kwaunogona, uye paunotanga kushandisa mamwe mabasa nemirairo, unogona kuenderera mberi nekuwedzera ruzivo rwako.
Unoda zvimwe Excel mazano here? Ona izvi vakasununguka Excel templates.
60 Yakanakisa Yemahara Pamhepo Makosi Kune Chero Zvaunoda Kudzidza
34 Mahara Pamhepo Ekushambadzira Makirasi Ekutora Iri Gore
13 Saiti Dzakanakisa dzeKudzidza Coding Kubva Mukutanga
14 Yakanakisa Sites Yemahara Makomputa Ekugadzira Makirasi
Filed Under: Excel kursi pamutsetse bezmaksas